Mimika manonja - ahoana no fomba hanafoanana ny hatezerana eo amin'ny maso, eo amin'ny handrina?
Ny fihoaran-tsain'ny mimika no fomba tsara indrindra ahafahana manala ny tsy fahampiana
Ny endriky ny hoditra eo amin'ny hoditra dia matetika mifandray amin'ny fahanterany. Tsy ny karnavaly rehetra no miseho noho ny fiovan'ny taona. Maro amin'izy ireo no vokatry ny endriny. Ireo vala ireo dia azo atao amin'ny fahatanorana sy eny amin'ny fahazazana.
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny kankana sy ny vanim-potoana?
Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo tsy fitoviana ireo dia mifototra amin'ny rafitry ny fisehoany. Ny taonan'ny fahanterana sy ny mimika dia miforona noho ny dingana samy hafa amin'ny hoditra. Ny karazana vala voalohany dia antsoina koa hoe gravité. Miseho izy ireo manoloana ny fihenan'ny elasticité sy ny elasticité ny dermis, ny fingododony amin'ny asa ataon'ny hery manintona. Ny kôdeksa mimika dia napetraka noho ny fihenan'ny fihenam-bozaka sasany. Nihanitombo tsikelikely izy ireo, ka nitodika tany amin'ny hoditra.
Nahoana no misy karazana mimika?
Ny antony fototra mahatonga ny fananganana ny karazam-pandrefesana azo raisina dia ny fihenan'ny fibra ny muscle. Ny mimika dia manjary manodidina ny maso, ny vava, eo amin'ny handrina ary manodidina ny orona dia tonga amin'ny ankizivavy izay manana ireto fahazarana ireto:
famoahana ny handrina;
ny fihenan-tsofina amin'ny molotra miaraka amin'ny "moka";
Ny fanamafisana ny fikolokoloana dia manoloana ireo singa eo ivelany sy anatiny:
hoditra maina ;
toetry ny rivotra;
miposaka amin'ny hatsiaka na masoandro;
hetsika ara-batana ambany;
fanondranana tsy fahampian-tsakafo;
tsy fahampian-tsakafo sy ny hafa.
Rahoviana no hiseho ny fihomehezana?
Ny karazan-damba hodinihina mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fiparitahan'ny lamaody amin'ny molotra mandoitra ho an'ny selfie ("duck", "face face"), mihodina manodidina ny vava ny ankamaroan'ny tovovavy, hatramin'ny 20 taona. Tatỳ aoriana, dia miseho daholo ny hatezerana eo amin'ny handrina. Ao amin'io faritra io, ny haavon'ny haavo indrindra, noho izany dia mijanona ela ny hatsiaka ary tsy hita maso, miseho amin'ny 30-40 taona.
Azoko atao ve ny manaisotra ny hatezerana amin'ny tarehy?
Ny fanamafisana ny tsy fahampian-tsakafo eo amin'ny tarehy dia sarotra na sarotra, indrindra raha efa lasa lalina izy ireo. Mora kokoa ny manalavitra ny fihantsiana eo am-piandohan'ny fametrahana, raha vao miforona izy ireo. Ho an'ireny tanjona ireny dia misy teknika maromaro izay azonao atao any an-tranonao. Ny fanaovana tsinontsinona ny fakam-panahin'ny halalin'ny halaliny dia natao amin'ny fomba lalina kokoa. Manoro soso-kevitra izy ireo hitsidika cosmetologista mahafeno fepetra ary manolotra tsindrona manokana.
Ahoana ny fomba fialana amin'ny hatezerana amin'ny tarehy?
Mba hanafoanana ny tsy fahampian'ny hoditra dia tokony hivoatra ny fitsaboana. Ny fomba mahomby amin'ny fanesorana ny felam-paty dia ahitana ny fampiasana ny menaka manitra manaraka:
alika voajanahary sy etè;
fampiasana ny tarehy;
Mimic dia manosihosy plaster
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia tsy miraharaha ireo fanovana ireo, fa tsy mahafantatra ny fitsipiky ny asany. Ny teknôlôjia, ny fomba famongorana ny fikolokoloana eo amin'ny handrina sy ny faritra hafa miaraka amin'ny fanampiana ny patch, dia mifototra amin'ny fialana amin'ny hafetsenan'ny tarehy. Ny famaritana ny famaritana dia mamaritra azy ireo amin'ny toeran'ny fitsaharana, ny fisorohana ny hoditra tsy hikisaka sy hiangona. Ny vokatra nambara dia hita taratra aorian'ny adiny iray, saingy ny vokatra azo antoka dia miseho rehefa feno ny dingana.
Tany am-piandohana dia tsy nisy afa-tsy poti-kazo kely fotsiny ho an'ny nasolabia sy ny handriny. Ireo orinasam-pambolena marefo dia nanamboatra fomba hanesorana ireo kankana eo amin'ny maso sy ny vava. Noho izany dia fitaovana matevina sy malefaka kokoa no ampiasaina izay tsy manimba ny hoditra marefo sy marefo, fa ny mamaivana fotsiny ny hafetsenan'ny tarehy. Fahaizana kalitika:
Fiteny ankapobeny sy ny hafa.
Mofo avy amin'ny taolam-paty
Ny vokatra kosmetika dia manana fiantraikany kumulative ary miasa aloha amin'ny sehatra amin'ny hoditra. Ny rivotra mifangaro dia mihalalaka miaraka amin'ny fanampian'izy ireo haingana, saingy sarotra be ny miala amin'ny ala. Rehefa misafidy ny hevi-bolo noheverina dia zava-dehibe ny mandalina amim-pitandremana ny firafiny. Mahaliana fa misy peptides, asidra hyaluronic ary singa voajanahary.
Kaopy tsara tsara:
Babor Skinovage sy ny hafa.
Diloilo avy amin'ny karazana mimika
Ny menaka sy ny menaka fambolena dia asaina ampiasaina miaraka amin'ny vokatra vita amin'ny kosmetika hafa. Miorina amin'ny ozinina, azonao atao ny manamboatra trano fialan-tsasatra na mampiasa azy ireo amin'ny endrika madio. Vehivavy maro no mampitombo ny tavy voajanahary novidina, ary nanampy trondro maromaro tamin'ny serum, tonic, lotion na crème.
Olon-menaka mahavokatra avy amin'ny taolam-paty:
Miray amin'ny nofatorana
Olon-menaka Peach - 30 ml;
ether lemon - 2 sotro;
ether ylang-ylang - 3 sotro.
Fiomanana, ampiasao :
Ao anaty tavoahangy vera iray, aforeto amin'ny fomba feno ny entana rehetra.
Mampiasà drafitra matevina eo amin'ny faritra misy olana, afaka manosotra hoditra marefo ianao, anisan'izany ireo faritra manodidina.
Aorian'ny 20 minitra dia afoy amin'ny faritra maloto miaraka amin'ny lamba malemy.
Maskin'ny tarehy mamohehatra
Ireo vokatra ireo dia miavaka amin'ny fahafaha-maivana sy ny fahaizana manamboatra. Ny masoko ao an-trano dia tsy manamaivana tanteraka ny fihoaram-pefy lalina, fa amin'ny fomba manahirana dia mahatonga azy ireo ho tsy dia hitan'ny mason-tsivana loatra sy tsy mitovy. Ireo vokatra kosmetika toy izany dia tsy tokony hifangaro amin'ny hoavy. Ny dingana tsirairay dia atao amin'ny fampiasana ny firafetana farany indrindra.
Maskin'ny alim-pifaliana ao an-trano
Fetsy fofom-barotra - 1 tbsp. sotro;
siramamy karazana voankazo novolena - 1 tbsp. sotro;
Mofo maitso mafana - 1 tbsp. sotro;
Hamorao ny vokatra azo avy amin'ny varimbazaha sy ny karôtô.
Ny lanjany nahazo tombony dia mametraka amin'ny toerana misy alim-borona.
Aorian'ny antsasak'adiny, esory ny masony ary esory amin'ny rano mafana ny tarehinao.
Ahosoy moramora ny hoditra amin'ny kibay.
Maskitra ho an'ny faritra manodidina ny maso, molotra
tantely voajanahary - 1 tsp;
Ejololo (mena) - 1 mai;
kafe oat 0.5-1 tsp.
Afangaro ny tantely amin'ny tantely.
Ampio ny afon-tsakafon'ilay fanangonana.
Ny masony matevina dia ampiharina amin'ny faritra misy kadra.
Aorian'ny 10 minitra, esory ny masony.
Apetaho amin'ny hoditra ny foitra.
Gymnastics avy amin'ny karnavaly
Ny karazam-pandrefesana azo raisina dia miforona noho ny hozatra tsy voatanisa izay mihenjana foana. Mba hisorohana ny fihoaram-pefy dia mila mampihatra azy ireo ianao amin'ny alalan'ny fampiharana tsotra nefa mahomby.
Mimic gymnastics ho an'ny tarehy amin'ny ketrona:
Vskinut avo ary hampidina ny volomasonao.
Fenoy mafy ny masonao ka sokafy ny masonao.
Tratra (amin'ny fotoana iray na eo ho eo).
Mandrosoa amin'ny molotra mangina, mba hikorontana, ary ao anatin'ilay dingana dia navoaka ny feo "pr".
Tokony haverina in-5-10 ireo fampiharana ireo. Ireo kilasy dia azo atao ao anatin'ny fotoana iray amin'ny andro, na any am-piasana aza, rehefa misy ny fihetseham-po tafahoatra amin'ny hozatry ny tarehy. Ny vokatra azo avy amin'ny gymnastique dia miseho rehefa 3-5 herinandro ny fampiofanana tsy tapaka. Raha toa ianao ka manao fanatanjahan-tena maharitra mandritra ny fotoana lava dia mihodina tanteraka ny vala, ary tsy voatery hiorim-bolo vaovao.
Fanitsiana ny ketsa ataon'ny hyaluronic
Ny votoatiny voalaza etsy ambony dia vita amin'ny vatan'olombelona, ​​saingy mihena ny famokarana. Ny injections amin'ny hyaluronic asid dia mbola fomba tsara indrindra hiatrehana ny fihomehezana mimika. Miaraka amin'ny fanampiana amin'ny injections, dia mihodina haingana ireo vala ireo, ary mameno fanafody. Amin'ny lafiny, ny asidra hyaluronic dia mamerina ny turgor amin'ny hoditra, mamerina ny elasticity sy ny elasticity. Mihazona ny fahamendrehana izany ary manakana ny tsy fahampian-drano.
Ny fanitsiana ny hametavetana amin'ny tarehy dia manome valiny maharitra sy maharitra, izay maharitra 10-12 volana. Aorian'ny famerenana ny asidra hyaluronic nasiana azy dia tsy maintsy averimberina ny fampidirana. Ao amin'ny trano fidiovana cosmetology ho an'ny injections dia ampiasaina manokana ny fanomanana:
Theosial sy ny hafa.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny tebiteby amin'ny orona?
Pikantsary ho an'ny volom-borona sy fery - inona no tsara kokoa?
Bdiaga avy amin'ny akne
Famoahana ireo fanaka amin'ny tarehy miaraka amin'ny laser
Faniriana tady ho an'ny fingotra
Loko volomparasy volomparasy
Tampons miaraka amin'ny tantely amin'ny gymnology
Bird Gamayun ao amin'ny angano slavy
Sary hosodoko amin'ny hazo
Fish coho - tombony sy fahasimbana
18 zava-misy mandresy lahatra izay hahatonga anao hanao tatoazy amin'izao fotoana izao
Katyk - tsara sy ratsy
Miaraka amin'ny vato
Curcuma - toetra mahasoa sy fanoherana
Adikao amin'ny alika - soritr'aretina, fitsaboana
Fanoloana sira - manimba na mahazo tombony amin'ny fahaverezan'ny lanja?
Tranom-bozaka miorina amin'ny endriky ny tranokala - inona no zavamaniry mety?
Fanamboarana embryon - fahatsapana